अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मदनकृष्णको सन्देश - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मदनकृष्णको सन्देश
कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना भएका कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ आठ दिनपछि डिस्चार्ज भएका छन् । शुक्रबार राति करिब १० बजेतिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडियो राखेर श्रेष्ठले आफू आठ दिनपछि मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको बताएका हुन् ।
कोरोनाले धेरै कमजोर बनाउने भएकाले हेलचक्र्याई नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।आफ्नो परिवारले छिमेकीबाट धेरै माया पाएकाले आफू भाग्यमानी रहेको समेत उनले बताएका छन् । उनले मास्कलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
Previous articleघरको वाइफाइ कसरी सुरक्षित राख्ने ?
Next articleभोलिदेखि उपत्यकामा थप कडाइ गरिने
बिनोद चौधरीको सम्पत्ति बढ्यो, पुगे विश्वका अर्बपतिको सूचीमा १९२९ औं स्थानमा
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा कसको तलब कति पुग्यो?